Mullah Oo War Kasoo Saaray 'khilaafka Ka Dhex » Axadle Wararka Maanta
Kabul (Axadle) – Ku simaha ra’iisul wasaare ku-xigeenka Afghanistan, Mullah Abdul Ghani Baradar, ayaa ka soo muuqday cajalad fiidiyoow ah si uu u beeniyo wararka sheegaya inuu ku dhaawacmay isku dhac dhex maray isaga iyo koox ka soo horjeeda ee Taliban.
Aasaasaha Taalibaan ayaan muddo dhowr maalmood ah la arag. Waxaa jiray warar sheegaya inuu khilaaf soo kala dhex galay hoggaamiyeyaasha Taliban, oo uu ku lug lahaa Baradar iyo koox iska soo horjeedda oo daacad u ah shabakadda awoodda badan ee Haqqani.
“Maya, tani run ma aha; waan fiicanahay waana caafimaad qabaa,” ayuu yiri Baradar markii la weydiiyay bal in la dhaawacay iyo in kale.
Muuqaalka gaaban – oo lagu baahiyay Twitter-ka xafiiska siyaasadda Taliban ee Doxa – ayaa muujinayay isaga oo fadhiya kursi u dhow wariyaha telefishinka dowladda, oo sida muuqata ka akhrinaya warqad.
“Waa Alle mahadiis ah in aan leenahay xiriir wanaagsan oo ah is xushmeyn. Xiriirkeena xitaa waa ka wanaagsan yahay midka ka dhexeeya qoysaska,” ayuu yiri.
Baradar ayaa ahaa hoggaamiyihii ugu horreeyey ee Taalibaan oo si toos ah ula xiriiray madaxweyne Mareykan ah, ka dib markii uu wadahadal dhanka taleefanka ah la yeeshay Donald Trump, sannadkii 2020-kii.
Intaas ka hor, wuxuu saxiixay heshiiskii Doxa ee ku saabsanaa ka bixitaanka ciidamada Mareykanka ee Afghanistan, isagoo wakiil ka ah Taalibaan.
Muuqaalka cusub ayaa yimid ka dib markii saraakiil sare oo ka tirsan Taalibaan ay sheegeen in taageerayaasha Mullah Baradar ay la dagaallameen garab daacad u ah Khalil ur-Rahman Haqqani – oo ah wasiirka qaxootiga, isla markaana ah shaqsi caan ka ah shabakadda Haqqani.
Xubin sare oo ka tirsan Taalibaan oo fadhigiisu yahay Qatar iyo qof kale oo xidhiidh la leh dhinacyada is khilaafsan ayaa sidoo kale xaqiijiyay in muran dhacay dabayaaqadii toddobaadkii hore.
Wararka ayaa sheegay in muranka soo baxay ka dib markii Baradar, oo ah ra’iisul wasaare ku-xigeenka cusub, uu tibaaxay in aanu la dhacsanayn qaab dhismeedka dawladdooda ku meel gaadhka ah.
Waxaa la sheegay in khilaafka ka dhashay cidda sheegan karta libinta guushii ay Taalibaan ka gaadhay Afghanistan.
Baradar ayaa lagu soo waramayaa inuu rumeysan yahay in guusha lagu gaadhay diblomaasiyaddii ay rag uu ku jiraa wadeen halka xubnaha ka tirsan kooxda Xaqaani ay iyaguna qabaan in libinta lagu gaadhay dagaal.
Dhanka kale kooxda Xaqaani ee awoodda badan ayaa lala xidhiidhiyaa qaar ka mid ah weeraradii ugu rabshadaha badnaa ee ka dhacay Afghanistan ee ka dhanka ahaaa ciidamadii dowladdii Afghanistan iyo xulafadooda reer Galbeedka, sannadihii la soo dhaafay. Kooxdan ayuu Maraykanku u aqoonsaday urur argagixiso.
Taalibaan ayaa la wareegtay gacan ku haynta Afghanistan bishii la soo dhaafay, tan iyo xilligaasna waxay ku dhawaaqday in dalkaasi yahay “Imaarad Islaami ah”.
Golahooda cusub ee ku meel gaadhka ah gabi ahaanba waa rag waxayna ka kooban yihiin saraakiil sarsare oo Daalibaan ah, kuwaas oo qaarkood caan ku yihiin weeraradii lagu qaaday ciidamada Mareykanka labaatankii sano ee la soo dhaafay.